# ဒေါနတောင်ခြေတွင် #KNU ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းချင်းဆိုင်. | democracy for burma
# ဒေါနတောင်ခြေတွင် #KNU ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းချင်းဆိုင်.
tags: မီဒီယာ ဒေါနတောင်ခြေတွင်, ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းချင်းဆိုင်., Burma, KNU, Myanmar
ကရင်အမျိုးသား- မီဒီယာ ဒေါနတောင်ခြေတွင် KNU ခေါင်းဆောင်များ ခေါင်းချင်းဆိုင်.
အောက်တိုဘာ – ၂၃ – ၂၀၁၄
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၏ အရေးပေါ်ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ယနေ့မှစတင်ကာ ဒေါနတောင်ခြေတွင် စတင်ကျင်းပနေပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင် (၅၀) ဦးရှိသည့်အနက် အားလုံးနီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC တွင် ဆက်လက်၍ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးနှင့်ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကော်သူးလေတပ်မတော်ဆိုင်ရာကိစ္စများ အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးရန်ပါရှိသည်ဟု ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးကပြောသည်။
ဘားအံခရိုင်ရှိ လေးဝါးတပ်စခန်းတွင် ယနေ့မှစတင်သည့် အရေးပေါ်ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို၂၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ်ပါက ရက်ထပ်တိုးကာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
ယခုပြု လုပ်နေသည့် အစည်းအဝေးကို နိုင်ငံတကာရှိ ကရင်အမျိုးသားများက စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှက်ရှိပြီး အမျိုးသားထုတရပ်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုသာ ရရှိစေလိုသည်ဟု သဘောထားပေးကြသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စောရှားဝေါ်က” လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ အမျိုးသားအကျိုးကိုရှေးရှုပြီး သဘောထားတွေ ကြီးပေးကြဘို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်နိုင်ငံရေးပါတီတခု၏ ခေါင်းဆောင်တဦးက” ကျနော်တို့ကရင်အမျိုးသားအများစုက KNU ကိုဘဲ စံအဖြစ်ထားရှိတာပါ သူတို့တလွဲတချော်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် သက်ရောက်မှုကကြီးတယ်ဆိုတော့ အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိဘို့ဘဲ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ပုံစာ – ပုံတွင်ပါရှိသည့်ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် ဗဟိုကော်မတီဝင် အားလုံးနီးပါး တက်ရောက်ကြသည်။
← #ดาวโหลดราชกิจจา #สัมปทาน #21 #ฉบับล่าสุดได้ ที่นี่ #ratchakitcha.soc.
#၂၂၊၁၀၊၂၀၁၄၊ #လူသတ်မှု့နဲ့ စွတ်စွဲခံထားရသည့် အလုပ်သမားနှစ်ဦး၏မိဘများကို မြန်မာပြည်မှ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ #KOH #TAO #CASE →